Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Ansixiyey sharciga Hanti-dhowrka guud ee dalka – Radio Daljir
Agoosto 22, 2015 7:30 b 0
August, 22, 2015 -Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaliya ayaa maanta oo sabti ah ansixiyey sharciga Hant-dhowrka guud ee dalka iyadoo Sharcigan oo ay xildhibaannada Baarlamaanku ansixiyeen bishii Jannaayo ee Sannadkan, ayaa waxaa dib u soo celiyay Madaxweynaha Somalia.
Madaxweyna Somalia, Xasan Sheekh ayaa markii uu akhriyay sharciga wuxuu dib ugu soo celiyay Baarlamaanka isgaoo Dalbaday in loo baahan yahay in Qaar ka mid ah Qoddobada Sharicgan la waafajiyo Dastuurka Dalka.
Guddiga Miisaaniyadda Maaliyadda, Qorsheynta iyo La-xisaatanka Hay’adaha Dowladda Somalia ayaa Golaha Shacabka us oo gudbiyay talooyin; iyagoo soo jeediyay in Sharciga Hani-dhowrka lagu saleeyo is-bedello xaddidan ee hoos ku faahfaahsan.
Madaxweynaha wuxuu soo jeediyay in Magacaabista Guddiga Madaxa-bannaan ee Hani-dhowrka lagu kobo Qodobka 114-aad oo laga saaro Qodobka 112-aad, taasoo guddigu ay ku raaceen.
Sidoo kale, Madaxweynaha Somalia ayaa soo jeediyay in deymaha Dowladda la amaahiyo lagu daro dakhliga dowladda oo markii hore ku koobnaa cashuuraha, adeegyada, deeqaha, Hantida iyo ilaha shaqaalaha dalka, arintaas ayuu guddiga Madaxweynaha ku raacay.
Arrinta ku saabsan dhismaha xafiiska hanta-dhowrka Qaranka wuxuu madaxweynaha soo jeediyay in Qodobka 112-aad aanu khuseyn Magacaabista Guddiga Madaxa-bannaan, taas oo sidoo kale guddiga uu ku raacay.
Qodobka Afaraad wuxuu Madaxweynaha soo jeediyay in La-xisaabtanka Golaha la Hoos-geeyo Golaha Shacabka, soo jeedintaas uu Guddiga Qaatay.
Dhanka kale, Madaxweynaha wuxuu codsaday in la caddeeyo cidda hanta-dhowruhu u soo jeedinayo Magacaabista iyo Xil-ka-qaadista Madaxda Waaxyaha Xafiiska Hanti-dhowrka, Dood-dheer kaddib Guddiga Arrinka uu soo jeediyay Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuuu sidoo kale soo jeediyay Arrinta Xasaanad ka Qaadista Hanti-dhowrka guud, arintaas uu guddiga ku raacay. Madaxweynaha Somalia wuxuu kaloo soo jeediyay soo jeediyay in hanti-dhowraha guud uu istiqaalada u gudbiyo cidda awoodda u leh Magacaabistiisa.
Ugu dambeyn, Wuxuu Madaxweynaha Somalia soo Jeediyay in Hanti-dhowrka uu Sidoo kale Warbixinadiisa u Gudbiyo Golaha Wasiirada iyo Xafiiska Madaxweynaha Arrintaas oo lagu raacay.